ढकमक्क फुल्यो सयपत्री, कृषकहरुलाई भ्याई नभ्याई (फोटो फिचर) - katuwalkhabar.com
ढकमक्क फुल्यो सयपत्री, कृषकहरुलाई भ्याई नभ्याई (फोटो फिचर)
२८ कार्तिक २०७७, शुक्रबार १३:३६
पाल्पा (रामपुर) शुक्रबार देखि यस वर्षको तिहार सुरु भएको छ । विगत वर्षहरुको तुलनामा चहलपहल कम देखिन्छ । यता पाल्पामा तिहार लक्ष्यित फूलखेती गरेका कृषकहरुलाई भ्याई नभ्याई भएको छ ।
बजार माग अनुसारको फूल टिप्न र माला तयार गर्नको लागि माचो सुरु भएको छ । देशका केही स्थानमा अत्याधिक वर्षाद हुँदा विरुवा नष्ट हुने तथा तिहार अघि नै फूल फुल्ने समस्या झेलि रहेको अवस्थामा माग अत्याधिक आउन थाले पछि उनीहरुलाई माग पुरा गर्न हम्मेहम्मे भएको छ । कोभिडका कारण बजार प्रभावित हुन्छ की भनेर चिन्ता गरेका कृषकहरु उत्सहित बनेका छन् ।
जिल्लामा गत वर्ष हाम्रो आधुनिक कृषि फर्म रामपुर ४ ले २ रोपनी बाट सुरु गरेको व्यवसायीक सयपत्री फूल खेती यस वर्ष जिल्ला भरी नै फैलिएको छ । कोरोना महामारीका विच पनि कृषकहरुले.सोकलाई शक्तिमा बदल्नका लागि जिल्लाका कृषकहरु १ विघामा सयपत्री फूलाएका छन् । जिल्लाको रामपुर, माथागढी, तानसेन, तिनाउँ र बगनासकाली लगाएतका स्थानका कृषकहरुले तिहारका लागि सामुहिक तथा व्यक्तिगत रुपमा फूल खेती गरेका थिए ।
हाम्रो आधुनिक कृषि फर्मका सञ्चालक दिल बहादुर थापाले अहिले जिल्लाका १ विघामा फूल खेती भैरहेको बताउनुभयो । थापाले भन्नु भयो, ‘कोभिडका विच पनि गत वर्ष २ रोपनी बाट सुरु भएको फूलखेती १ विघामा फैलिएको छ । यस वर्ष अन्य स्थानमा अधिक वर्षाले उत्पादन हुन नसकिरहेको र कतै दशैंमा नै फूल फुल्नाले क्षति व्यहोरे पनि पाल्पामा उचित हावापानीका कारण समय मै फूल फुल्यो । अहिले जता ततै बाट माग आईरहेको छ । पाल्पामा उत्पादन भएको फूलले माग धान्न नसक्ने अवस्था छ ।’ थापाले २ दिन यता फूल टिपेर बजार पठाउन तथा माला तयार गर्न भ्याई नभ्याई रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पाल्पाको फूल बुटवल र नेपालगन्ज पुगिसकेको छ । काठमाडौ र कैलाली बाट पनि माग आए पनि पठाउन नसकिएको बताउनुभयो । ‘हामीलाई अहिले बुटवल र स्थानीय बजारको माग पुर्याउन हम्मे हम्मे परेको छ । ढुवानीका लागी सहज भएको भए त गज्जबै हुने रहेछ नि ।’ थापाले थप्नुभयो ।
माथागढी २ रुप्सेका कृषक दामोदर घर्तिले पनि बजार बाट माग अत्याधिक आएको बताउनुभयो । तरकारी खेती पछि यस वर्ष पहिलो पटक सयपत्री लगाएका घर्तिले फूल बजारले थप उत्साह थपेको बताउनुभयो । कृषकहरुले कोरोना महामारीको प्रभाव जहाँ तहीँ रहेको भन्दै उत्पादन भएको फूल तथा मालाहरु गत वर्ष भन्दा केही मुल्य समायोजन गरेर बजारमा पठाईरहेको बताएका छन् । फूल प्रतिकिलो ४ सय र माला प्रति गोटा एक सयको दरले उनीहरुले विक्री गर्दै आएका छन् । पाल्पामा मात्र होईन पछिल्लो समय देशका विभिन्न जिल्लामा पुष्प व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ । तर पनि बजारमा भारतिय फूलको प्रयोग पनि उत्तिकै देखिएको छ । सरकारले पनि स्वदेशमा फूलको प्रवद्र्धन संगै भण्डारण र बजारिकरणमा ध्यान दिन सके वर्षेनी फूल आयातका लागि विदेशिने रकम रोक्न सकिन्थ्यो की ?
Posted in अर्थिक, कृषि, पर्यटन, पाल्पा, प्रदेश नं. ५, प्रदेश समाचार, भिडियो/फोटो, समाचार